सुन्तला गाउँ बिहुँ ! झट्ट हेर्दा जंगल जस्तो देखिन्छ – www.agnijwala.com
सुन्तला गाउँ बिहुँ ! झट्ट हेर्दा जंगल जस्तो देखिन्छ
अग्निज्वाला डटकम संवाददाता
। त्यही जंगलको बीच–बीचमा रातो माटो र सेतो कमेरोले पोतेका घरहरु छाटकछुटुक देखिन्छन् । कसैलाई लाग्न सक्छ त्यो सच्चिकै जंगल हो की रु तर त्यो जंगल होईन । जंगल जस्तै देखिने त्यो हो, बिहुँगाउँको सुन्तला बगान । सुन्तलाको रुखहरुले गाउँको मुहार नै फेरिदिएको छ । गाउँ रमणीय भएको छ ।
काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बिहुँका किसानहरु व्यवसायीक सुन्तला खेति तर्फ आकर्षित हुँदै गएपछि गाउँ नै सुन्तलामय बनेको छ । सुन्तलाको बोटहरुले गाउँको सोभा नै बढाएको छ । कोदो, मकै, धान, तोरी लागाउने बारीहरु सुन्तला बगानमा परिणत भएका छन् । यहाँ सुन्तलाको बोट नभएको घर भेट्याउन नै गाह्रो पर्छ ।
खेतबारीमा काम गर्ने युवा शक्ति विदेश पलायन भएपछि सुन्तला खेति गर्न थालेका स्थानीय किसानहरु पछिल्लो समय सुन्तला व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी समेत गर्न थालेका छन् ।। उनीहरु सुन्तला खेतिबाट सन्तुष्टि समेत छन् ।
धान, कोदोलाई रोपाई गर्न खेतालादेखि लिएर पानी, गोडमेल, काट्ने र नल पराल गर्दा धेरै श्रम र पैसा लगानी गर्नुपर्छ तर, सुन्तलामा बिरुवा लगाए पछि बढी दुःख गर्नु पर्दैन स्थानीय किसान बालानन्द कँडेलले बताउँछन् । कँडेलले पछिल्लो युवापुस्तामा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै गाउँका खेतबारीहरु बाँझिन थालेकोमा गुनासो पोखे ।
‘गाउँका धरैजसो विदेश जान्छन्, गाउँमा बाँकी भएका पनि सुख खोज्दै बजार पस्छन्,’ कँडेलले भने ‘यसले गर्दा गाउँ बाँझिन थाल्यो, हामीलाई परम्परगात खेति गर्नका लागि दुःख भएर सुन्तला खेति गर्न थालेका हौँ ।’ उनले परम्परागत खेति गर्दाको दुःख पनि नउठ्ने बताउँदै सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी हुने बताए ।
किसानहरुले गाउँको आधाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरेको व्यवसायिक सुन्तलाबाट वर्षेनी ३ करोडभन्दा बढी आम्दानी भित्रिने गरेको अर्का किसान टिकाराम कँडेलले बताए । गत वर्ष मात्रै आफुले तीन लाख रुपैयाँको सुन्तला विक्री गरेको उनको भनाई छ ।
उनले धेरै दुःख गरेर धान, मकै, कोदो लगाउँदा राम्रो प्रतिफल नमिल्ने बताउँदै कम दुःख गरे पनि सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले गाउँलेहरु सुन्तला खेति तर्फ आकर्षित भएको बताए ।
उक्त गाउँमा ११ ब्लक बनाएर व्यवस्थित रुपमा सुन्तला खेति विस्तार समेत गरिएको छ । गाउँको फापरचौर, इनारपानी, चक्रेडाडाँ, किम्बोट, चिरपानी लगायतका स्थानहरुमा सुन्तला खेति विस्तार गरिदैछ । सुनतला खेति विस्तार गर्न गाउँमा भएका अन्य रुख विरुवाहरु सबै काटिएको छ ।
गाउँलाई सुन्तलाको जोनको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहले पनि सहयोग गरेको छ । काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को कार्यालयले किसानलाई चार समूहमा बाँडेर स्तरीकरण गरेको वडा अध्यक्ष युक्त प्रसाद कँडेलले बताए । वडा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गाउँमा करिब ४० हजार सुन्तलाका विरुवा लगाईएको छ । अहिले झण्डै २५ हजार विरुवाले उत्पादन दिन सुरु गरेका छन् ।
वडा कार्यालयले स्थानीयलाई व्यवसाय उन्मुख, सिमान्तकृत, निर्वाहमुखी र सौखिन कृषक भनेर वर्गिकरण गरेको छ । गाउँका ४ सय ७६ परिवार कृषि पेशामा आबद्ध छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले निर्वाहमुखी कृषि पेशा गर्ने गरेका छन् तर तिनीहरुलाई व्यवसायीक बनाउनका लागि वडा कार्यालयले यस्तो योजना बनाएको अध्यक्ष कँडेलको भनाई छ ।
अध्यक्ष कँडेलले वडा कार्यालयले अबको पाँच वर्षमा सुन्तलाबाट वार्षिक १० करोड भित्राउने लक्ष्य राखेको बताउँदै त्यसका लागि अहिले विरुवा रोप्ने काममा तिव्रता दिएको बताए । विरुवाका खरिदका लागि वडा कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई दिएको छ । केही किसानहरुले आफ्नै बगानमा विरुवाहरु उत्पादन गरेका छन् ।
आज विजया दशमी : देवी विसर्जनको शुभ साइत बिहान ८ः१९ बजे
ताइवानमा भिषण बिस्फोट हुदा ४६ को मृत्यु कयौ घाइते
आजको तपाईंको दिन कसरी बित्दै छ त थाहा पाउन हेर्नुस् राशिफल
चाडपर्वले सबै नेपालीका बीचमा आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने : नेपाल
बेलायतमा बढे कोरोना सङ्क्रमणका बिरामी
दैनिक दौडाइले शरीरमा हुने फाइदा तथा दौडने तरिका यस्ता छन
महानवमीका दिन, यी कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नुहोस, अन्यथा ठूलो घाटा ब्यहोर्नपर्ने हुनसक्छ
भारी ब्याट्री क्षमताको स्मार्ट फोनका अन्य बिशेषता सुन्दा धेरै मान्छे किन्ने तयारीमा
सबैभन्दा महँगो स्कुटर को लागी बुकिङ सुरु मुल्य यसरी निर्धारण गरियो
अश्विनको यो ठूलो गल्तीका कारण दिल्लीको टी २० विश्वकप अघि फाइनलको मौका गुम्यो
आज विजयादशमी, टीका थाप्ने प्रभावशाली समय बिहान १०ः०२ बजे